First notebook entry: Introducing myself - Learn Somali - italki Notebook
You are in » Notebook » Somali
First notebook entry: Introducing myself Astaamaha Lagu Garto Qofka Jacaylka Dhabta Ahi Haleelo (Warbixin) 1- Qofka sida dhabta ah wax u jeceli waxa uu u ilaaliyaa una sharfaa lamaanaha kale ee uu jecel yahay si ka badan sida uu u daryeelo naftiisa.
3- Qofka Jacaylka rasmiga ahi heleelaa si dhab ah ayuu u ilmeeyaa una ooyaa mar kasta oo uu xasuusto lamaanaha uu u jecel yahay, Isaga/Iyada.
4- Mar kasta oo uu soo dhaco Tilifoonkiisu Iyada/Isaga waxa uu jecel yahay in uu noqdo codkii lamaanaha uu sida dhabta ah u jeclaa.
13- Qofka sida dhabta ah wax u jeceli waxa uu bilaabaa dhegaysiga heesaha iyo miyuusiga dabacsan ee ay ku jiraan erreyada macnaha leh ee ku dhibca Qalbiga ee ku saabsan qiimaha, qadarinta iyo xushmada Jacaylka. 14- Qofka sida dhabta ah wax u jeceli waxa uu mar kasta door bidaa in uu ka maqlo lamaanaha kale ee uu jecel yahay in uu ka badheedho jacaylka oo uu ku yidhaahdo waan ku jecelahay. 15- Hadii uu ku hayo Jacayl dhab ahi aragtida indhahaaga iyo qalbigaaga waxa aad ku lamaanaysaa Lamaanaha aad sida xaqiiqda ah u jeceshahay, mar walbana waxa aad jeclaataa ilaa xad ag joogiisa, muuqiisa, codkiisa iyo sheekadiisa Isaga/Iyada.
Share: 0 dayahadde
More notebook entries written in Somali
First notebook entry: Introducing myself (0)First notebook entry: Introducing myself (2)First notebook entry: Introducing myself (2)First notebook entry: Introducing myself (0)First notebook entry: Introducing myself (0)